လမ်းညွှန် | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label လမ်းညွှန်. Show all posts
ဝင်းဒိုးစ် တင်းန်း ဗားရှင်း ပါတဲ့ ကွန်ပျူတာ ပီစီ သို့မဟုတ် လက်တော့ပ် တွေမှာ ဟာ့ဒ်ဒရိုက်စ် ဘယ်လောက်ပဲ ကြီးနေပါစေ၊ တယ်ရာဗိုက် ပမာဏ ဘယ် လောက် ရှိနေ ပါစေ၊ ဒေတာ သိမ်းထား တာတွေ အရမ်း များပြီး ကျပ်နေရင် နေရာလွတ် မရှိတာတွေ စက်ဟန်း တတ်တာတွေ ဖြစ်တတ် ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မိမိ အနေနဲ့ စက်အတွင်း ဒေတာ သိမ်းရာမှာ နေရာလွတ် ကျန်စေဖို့ နည်းလမ်း တွေကို Techno King ကွန်ပျူတာနဲ့ မိုဘိုင်းလ် ဆားဗစ်ဆိုင်မှ ကိုဆက်အောင်က အောက်ပါ အတိုင်း ဖြေပေး ထားပါတယ်။
သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ စက်အတွင်း သိုလှောင်မှု ကန့်သတ် ခံနေရရင် အရင်ဦး ဆုံး လုပ်ဆောင် ရမှာက ဟာ့ဒ်ဝဲ အပ်ဒိတ်လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်
raw image file တွေကို ဖျက်ပစ်ပါ။
မှတ်ချက် အနေနဲ့ စက်ဟန်း တာတွေ သို့မဟုတ် နေရာလွန် ကန့်သတ် ချက်ခံရတဲ့ အခါ စက်ကို restart ချတာတွေ ခဏခဏ မလုပ်ပစ်ဖို့ ကိုဆက်အောင်က အကြံပြု ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ခဏ ခဏ လုပ်ဆောင်လို့ အခန့်မသင့်ရင် အတွင်းထဲ ကဆော့ဖ်ဝဲတွေကို error ဖြစ်တတ် တာကြောင့်လို့ သိရ ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က စက်နေရာ မလွတ်တာတွေ၊ စက်ဟန်း လာရင် သုံးစွဲသူ အများစုဟာ ဆိုရင်items တချို့ကို ချက်ချင်း ဖျက်တတ် ကြပါတယ်။
ဥပမာ ဓာတ်ပုံ၊ docum-ent စတာတွေကို ပိတ်ပေ မဲ့လည်း recyclebin ထဲရောက် သွားတာကြောင့် recycle bin ထဲဝင်ပြီး delete ထပ်လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး disk cleanup လုပ်ရ ပါမယ်။ ဝင်းဒိုးစ်တွေက disk cleanup ကိုအခြေပြုပြီး ဖွဲ့စည်း ထားတာ ဖြစ်တာကြောင့် နေရာလွတ်ကျန်ဖို့ disk ထဲက ဖိုင်တွေကို ရှင်းပစ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဥပမာအင်တာနက်ထဲ ဝင်ထားတဲ့ recent ဖိုင်တွေ၊ dump files နဲ့ ဝင်းဒိုးစ် installations လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို ဖျက်ပစ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။
Disk cleanup လုပ်ဖုို့ start menu ထဲဝင်ပါ။ အက်ပ်အားလုံးအောက်က > windows administrative tools >disk cleanup ကိုတွေ့မှာ ဖြစ်တယ်။ ပြီးရင် clean လုပ်ချင်တဲ့ drive ကိုရွေးပြီး clean up လုပ်ကာ Ok နှိပ်ပါ။
အဲသည်အခါ disk clean up ကနေရာလွတ်ဘယ်လောက်ကျန်တယ် ဆိုတာကိုတွက်ချက်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ system file တွေကို ဖျက်ပစ် ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ system file ကို clean up လုပ်လိုက်ပါ။ System file ဆိုတာက ဝင်းဒိုးစ် အဟောင်းဖိုင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ disk ကို running မလုပ်ထားတဲ့ ဒေါင်းလုပ်ဒ် ဆွဲထားတဲ့ ဖိုင်တွေကိုဖျက်ပစ်ရပါမယ်။
ဥပမာ whatsapp လိုအက်ပ်တွေ၊ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ဒေါင်းထားတဲ့ အခါယာယီ လိုမျိုး temporary file တွေကျန်နေ တတ်ပါတယ်။ အဲသည်ဖိုင်တွေ ကလည်း စက်အတွင်း နေရာတော်တော် များများယူထား တာကြောင့် ဖျက်သင့်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဝင်းဒိုးစ်တင်န်းရဲ့ deault အက်ပ်တွေဖြစ်တဲ့ မြေပုံအက်ပ်၊ one note အက်ပ်နဲ့ photos အက်ပ်တွေကိုမလိုအပ်ရင် ဒေါင်းလုပ်ဒ်မဆွဲပါနဲ့။ ဒေတာ ဆိုက်ကြီးတဲ့ အက်ပ်တွေ ကနေရာပို ယူတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်နည်းကတော့ ဖိုင်နဲ့ဒေတာအများစုကို ကလောက်ဒ်(cloud)ထဲ မှာသိမ်းဆည်းပါ။ Cloud က အင်တာနက်ဒေတာသိုလှောင်မှုရဲ့ နေရာ အနေ အထားကို ရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။
သူက ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာစတဲ့ စက်ပစ္စည်းထဲက ဒေတာမှန်သမျှကို အချိန်မရွေးလက်ခံပြီးသိမ်းဆည်းပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလောက်ဒ်ထဲမှာ အကန့် အသတ်မရှိ မိမိရဲ့ဖိုင်တွေကို back up အနေနဲ့ သိမ်းဆည်း ထားလိုက်ရင် စက်အတွင်း နေရာလွတ် ကျန်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဏ္ဍ Window, နည်းလမ်းများ, လမ်းညွှန်
အိုင်ဖုန်းသုံးသူတွေ ပုံကောင်းကောင်းရဖို့ ကင်မရာ ဘယ်လို ချိန်မလဲ?
အိုင်ဖုန်း သုံးစွဲ သူတွေ အနေနဲ့ ဓာတ်ပုံ ကောင်းကောင်း တစ်ပုံ ထွက်ဖို့ ကင်မရာ setting ချိန်နည်း ရိုက်ကူး နည်းတွေကို အက်ပဲလ်က လမ်းညွှန်ပေး လိုက်ပါတယ်။
သည်နည်းလမ်းကတော့ အလွယ်ကူ ဆုံးနဲ့ ဆက်တင်ချိန်ရိုက်ကူးရတာ ဖြစ်ပါ တယ်။ Auto mode ထက် manual mode နဲ့ ရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင် မိမိအနေနဲ့ လိုချင်တဲ့ အလင်းအမှောင်ကို သေချာရိုက်ကူး နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိုင်ဖုန်းမှာ အန်းဒရိုက်တွေလို manual mode သီးသန့်မပါဝင်ပေမဲ့ ကင်မရာ ဆက်တင်ချိန်နည်းတွေကို အက်ပဲလ်က သူ့ရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုနဲ့ ဖော်ပြပါတယ်။
နေအလင်းရောင်စူးတဲ့ အချိန်နဲ့ နေ သာတဲ့ အချိန်တွေလိုအပြင်ဘက် outdoor ရိုက်ကူးတာ ဖြစ်စေ၊ မီးအလင်းရောင်များ တဲ့ indoor ဖြစ်စေသည်လို ဆက် တင်ညှိပါ။ အလင်းရောင်အောက်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခံမယ့် သူ့ကိုကင်မရာမှာ ဖိုးကပ် ထောက်ပြီးသေချာချိန်ပါ။
စခရင်ပေါ်မှာ လက်နဲ့ အောက်ဘက် ကို ဆွဲပြီးနေပုံသဏ္ဍာန် exposure ဆိုတာကို အနိမ့်ဆုံးထားလိုက်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ ချက် ခြင်းရိုက်ကူးပါ။
မိုးအုံ့နေတဲ့ပုံစံမျိုး foreign ဆန်ဆန် ရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင်လည်း cloudy ကို ရွေးနိုင်ပါတယ်။
မှောင်တဲ့နေရာတွေမှာဆိုရင် ဆက်တင်ဆန့်ကျင်ဘက်ချိန်ပါ။ ရိုက်ကူးခံမယ့်သူ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို ဖိုးကပ် ထောက်ပြီး စခရင်အပေါ်ဘက်ကို ဆွဲကာ နေပုံသဏ္ဍာန် exposure ဆိုတာကို အမြင့် ဆုံးထားလိုက်ပါ။
တချို့ဓာတ်ပုံတွေက အလျားလိုက် ရိုက်ကူးရတာမျိုး ရှိပါတယ်။ မြင်ကွင်း ကျယ်ကျယ် ရိုက်ကူးမယ့် aနရာတွေ၊ အဖွဲ့လိုက်ပုံ ရိုက်ကူးဖို့ horizon mode နဲ့ ရိုက် ကူးကြ ပါတယ်။ ဖုန်းကင်မရာ ကိုယ်ထည်ကို အလျားလိုက် ရိုက်ကူးတာက horizon setting ချိန်ပြီး ရိုက်ကူး တာလောက် resolution သိပ်မကောင်းပါဘူး။
Horizon mode ရိုက်ကူးမယ်ဆိုရင် ဆက်တင်ထဲက grid ကို turn on လုပ်ပါ။ Setting>Photos & Camera >Grid On ထဲဝင်ပါ။ HDR ကို turn on လုပ်ပြီး high-lights နဲ့ shadows ကို on ပါ။
အဲသည်ထဲ က frame the horizon along the grid lines ကိုရွေးပြီး ရိုက်ကူးပါ။ Gird Line တွေမှာ ratio အချိုးတွေကိုရွေးပြီး ရိုက်ကူး နိုင်ပါတယ်။
ကဏ္ဍ နည်းလမ်းများ, လမ်းညွှန်
အွန်လိုင်း ကနေ အခမဲ့ သင်ယူနိုင်မယ့် ပညာရေး ၀က်ဘ်ဆိုက်
ရန်ကုန်၊ ဇန်န၀ါရီ ၂၈ – အွန်လိုင်းကနေ မိမိ သင်ယူ လိုတဲ့ သင်ခန်းစာ၊ ဘာသာ ရပ်တွေကို မြန်မာ ဘာသာနဲ့ အခမဲ့ သင်ယူ ကြည့်ရှုနိုင်မယ့် ပညာရေး ၀က်ဆိုက် ကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
နည်းပညာနဲ့ ဆိုင်တဲ့programming သင်တန်းတွေ ၊ အောတိုကတ် ၊photoshop၊ ဒီဇိုင်း သင်တန်းတွေ ၊web builder၊ အချက် အပြုတ်နဲ့ မုန့်ဖုတ် သင်တန်းတွေ ၊ အတီး အမှုတ် ၊ အနုပညာနဲ့ ၊ ပန်းချီ ပုံဆွဲသင်တန်းတွေ ၊ ဓါတ်ပုံ ပညာ သင်တန်းတွေ အစရှိတဲ့ သင်တန်းတွေ နဲ့ workshop တွေ ၊ event တွေ ကိုပါ အခမဲ့ စာရင်း တင်သွင်းလို့ ရပါတယ်။
ပြည်ပက သင်တန်း ကျောင်းမှာ တက်ရောက် သင်ကြားဖို့ အစီအစဉ် ရှိတယ်ဆိုရင်လည်း BurmeseHearts က ဝန်ဆောင်မှု ပေးသွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မိမိ အနေနဲ့ သင်ကြား လိုသူ ဖြစ်မယ် ဆိုရင်လည်း သည်ဝက်ဆိုက် ကနေ စာရင်းပေးပြီး သင်ကြား ပို့ချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သည် Burmesehearts.com ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဟာ လက်ရှိမှာ သင်ခန်းစာပေါင်း ၉၀၀ ကျော်ကို သင်ယူနေတဲ့ သင်ယူ သူပေါင်း ၂၈၀၀၀ ကျော်ကို ပညာပေးနေတဲ့ အွန်လိုင်း ပညာရေး ဝက်ဘ်ဆိုဒ် တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ကိုယ်တိုင်က ကျောင်းသား / ကျောင်းသူ ဆိုရင်တော့ အခပေး သင်တန်းများခေါင်းစဉ်ပေါ်နှိပ်ပါ။ ပြီးရင်အောက်မှာ မိမိ သင်ယူလိုတဲ့ သင်ခန်းစာ ၊သင်တန်းတွေကို ရှာဖွေကြည့်ရှု သင်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာရဲ့ ၉၉ရာခိုင်နှုန်းဟာ အခမဲ့ သင်ခန်းစာတွေဖြစ်လို့ ကြိုးစား သင်ယူ ချင်သူတွေ အနေနဲ့ ငွေကြေး မရှိလို့ ဖြစ်စေ အချိန် မကိုက်လို့ ဖြစ်စေ သင်ယူခွင့် မရတာမျိုး မဖြစ်ရအောင် မိမိ အဆင်ပြေတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ အခမဲ့ သင်ယူခွင့် ရှိအောင် စီစဉ်ပေး ထားတာဖြစ်ကြောင်း ၀က်ဘ်ဆိုက် တည်ထောင် သူက ဆိုပါတယ်။
နောက်ပြီး မိမိသင်တန်း ကျောင်းတွေကို BurmeseHearts မှာ တင်သွင်း လိုတဲ့ သင်တန်း ကျောင်း အုပ်ချုပ် သူတွေ အနေနဲ့ အခမဲ့ စာရင်း တင်သွင်းလို့ ရပါတယ်။
ဒီသင်တန်းကျောင်းမှာ BurmeseHearts ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကတဆင့် ဆက်သွယ်တက်ရောက်တဲ့ သင်တန်းသားတွေကိုသာ ဝန်ဆောင်ခ ကော်မရှင် ရာခိုင်နှုန်း သတ်မှတ်ယူသွားမှာဖြစ်တဲ့ အတွက် သင်တန်းကျောင်းတွေ အနေနဲ့ ဘာငွေမှကြိုတင်ပေးဆောင် ထားရ တာမျိုး မရှိပါဘူး။
သင်ကြားပြသသူအဖြစ် စာရင်းဝင်မယ်ဆိုရင် ၀က်ဘ်ဆိုက်ရဲ့မူလစာမျက်နှာ လိုင်းမှာရှိတဲ့ ‘အခပေး သင်တန်းများ’ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ပေါ်နှိ်ပ်ပါ။ ပြီးရင် သင်ကြားပြသသူ လေးက ကလစ်နှိပ်ရန်ကို နှိပ်ပြီး စာရင်းသွင်းနိုင် ပါတယ်။
မိမိက ဆရာ တစ်ဦးဖြစ်ရင် အပိုဝင်ငွေကြောင့် ဖြစ်စေ၊ အခမဲ့ သင်ပေး လိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒဖြစ်စေ သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ အီးမေးလ်နဲ့ အကောင့် ဖွင့်ပြီး စာရင်းပေး သင်ကြား နိုင်ပါတယ်။
မိမိအချိန် မပေးနိုင် တာကြောင့် အွန်လိုင်း ကနေ သင်ယူမယ် ဆိုရင်လည်း မိမိ သင်ယူချင်တဲ့ဘာသာရပ်၊ သင်ခန်းစာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သင်တန်းတွေ ကိုလည်း အခကြေးငွေနွှဲ ဖြစ်စေ အဲ့သည် ၀က်ဆိုက်မှာ စာရင်းပေးသွင်းပြီး တက်နိုင် ပါတယ်။
မျှဝေသူ ရစ် မောင် မှာ Saturday, January 28, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ ပညာရေးသတင်း, လမ်းညွှန်
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး Viber နှင့် ချိတ်ဆက်နည်း
“Myanmar President Office” နာမည်နဲ့ Viber မှာ Public Chat ဖွင့်လှစ် လိုက်ပါပြီ။
Public Chat မှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးရဲ့ သတင်းများကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ တင်ပေးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းများကို မိတ်ဆွေ တို့ရဲ့ Viber မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ အတွက် Follow လုပ်ထား ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Public Chat Follow လုပ်နည်းမှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ဝဘ်ဆိုဒ်မှ ကူးယူ မျှဝေပါသည်။
Originally published at - နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, July 01, 2016 No comments:
လည်ပတ်စရာတွေ ပြည့်နေတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေး
မြန်မာနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီ လက်အောက် ကျချိန် အတွင်းမှာ အင်္ဂလိပ်တွေ ကိုယ်တိုင် တည်ခဲ့ပြီး ကိုလိုနီ လက်ရာ အဆောက် အဦးဟောင်းတွေ မပျောက် မပျက် ရှိနေသေးတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေး တစ်မြို့နဲ့ ဒီတပတ်မှာ စာဖတ် သူတွေကို မိတ်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်။
ကိုလိုနီခေတ်လက်ရာတွေနဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးလိုဆိုလိုက်တာကြောင့် မိတ်ဆွေတွေမျက်စိထဲမှာ နာမည်ကျော်မေမြို့ (ပြင်ဦးလွင်မြို့)ကို ပြေးမြင်ကြမှာပါ။ တကယ်ကတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ရှမ်းပြည်နယ်အစပ်နားက တောင်တွေပတ်လည်ဝိုင်းထားလို့ ယောက်ချိုခွက်လေးလိုဖြစ်နေတဲ့ နေရာအခင်းအကျင်းမှာတည်ထားတဲ့ ကလောမြို့လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကလောမြို့ဟာ အင်္ဂလိပ်တွေအချိန်အကြာဆုံးနေထိုင်သွားကြတဲ့မြို့ ဖြစ်တယ်လို့ မြို့ခံတွေက သိထားကြတယ်။ နောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရသွားချိ်န်မှာတောင် အင်္ဂလိပ်တွေဟာ ဒီမြို့လေးကနေ ထွက်မပေးသေးတာကြောင့် အနီးနားကတိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင် ၀ိုင်းဝန်း နှင်ထုတ်ခဲ့ကြရတယ်လို့ ဆိုကြတယ်။
သူတို့မစွန့်နိုင်ဖြစ်ရလောက်အောင်လည်း ကလောမြို့လေး ရဲ့ ရာသီဥတုရော၊ ဒေသပတ်ဝန်းကျင်ရော၊ ရေခံမြေခံတွေကပါ အလွန်ကောင်းလွန်းလှတယ်။ အခုလိုအေးတဲ့အချိန်တွေဆိုရင် ချယ်ရီပန်းတွေဖောဖောသီသီနဲ့ ပွင့်နေပါပြီ။
ကလောမြို့ဟာ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၁၃၂၀မီတာ (၄၃၃၀ပေ) အမြင့်မှာတည်ရှိတဲ့ မြို့ကလေးပါ။ ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့ကြီးတွေကနေ အောင်ပန်း၊ ပင်းတယ၊ တောင်ကြီးမြို့တွေဆီ အလည်သွားရင် ဖြတ်ရမယ့် လမ်းခုလတ်မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်။
ကလောမြို့ကိုသွားမယ်ဆိုရင် ကား၊ ရထား၊ လေယာဉ်ပျံအစရှိသဖြင့်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကားနဲ့ ဆိုရင်တော့ ကလောကို တိုက်ရိုက်ကားမရှိပါဘူး။ တောင်ကြီးကားတွေနဲ့လိုက်ပြီး ကလောမြို့မှာ ဆင်းနေရမှာပါ။
ရထားနဲ့ဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်-ရွှေညောင် ရထားနဲ့လိုက်စီးခဲ့ရမှာပါ။ မန္တလေး ဘက်ကနေတော့ ရထားသီးသန့်မရှိပါဘူး။ သာစည်ဘူတာကနေ တဆင့်သွားစီးကြရဦးမှာပါ။ လေယာဉ်နဲ့ဆိုရင်တော့ ဟဲဟိုးလေဆိပ်ကနေတဆင့် ကလောမြို့ကို ကားနဲ့ ထပ်လာကြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်တွင်းခရီးသွားတချို့ကတော့ ဖြတ်သွားဖြတ်လာမြို့အဖြစ်လောက်သာ ကလောမြို့ကို စိတ်ဝင် စားကြပါတယ်။ တကယ် ကလောမြို့တွင်းကို နှံ့နှံ့စပ်စပ် လေ့လာ လည်ပတ် သူတွေ ကတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေပါ။
ကလောမြို့နဲ့အနီး တ၀ိုက်က ပင်းတယ၊ ရွာငံ၊ အင်းလေး အစရှိတဲ့ aနရာတွေကို တောကြမ်း လမ်းလျှောက်ဖိုY အခွင့်အရေးတွေ အများကြီး ရှိတာကလည်း နိုင်ငံခြားသားတွေကို စွဲဆောင် ထားသလို ဖြစ်နေတယ်လေ။
ကလောမြို့လို့ ဆိုလိုက်တာနဲ့ နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်တွေဟာ တောကြမ်းခရီးသွားတာတွေကိုပဲ အဓိကတွဲမြင်လေ့လရှိကြတယ်။ ကလောမြို့ကနေ တစ်ညအိပ် ၂ ရက်၊ ၂ ညအိပ် သုံးရက်နဲ့ နေ့ချင်းပြန် ဆိုပြီး တောလမ်း ခရီးစဉ်လမ်းကြောင်း အမျိုးမျိုးရှိတယ်။
ကလောကိုအခြေခံပြီး ခရီးအကွာအဝေးမိုင် ရေတွက်မယ်ဆိုရင် အင်းလေးအထိ ၄၂ မိုင်၊ ပင်းတယအထိ ၄၁ မိုင်၊ ရွာငံအထိ- ၃၄မိုင် အသီးသီးရှိပါတယ်။ လမ်းတလျှောက်က ပအိုဝ်း၊ ပလောင်၊ တောင်ရိုးဓနု စတဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ရွာတွေနဲ့ သူတို့အဓိကစိုက်ပျိုးနေကြတဲ့ မက်မန်းခြံတွေ၊ လိမ္မောခြံတွေ၊ လက်ဖက်ခြံတွေကို လေ့လာကြရတာကို နိုင်ငံခြားသားတွေက မက်မောကြတယ်။
ကလောမြို့ဧရိယာထဲမှာတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေ အများဆုံးလေ့လာကြတာက ကလောဘူတာရုံ ပါ။ အင်္ဂလိပ်တွေတည်ခဲ့တဲ့ ကလောဘူတာရုံမှာ ၁၉၁၆ ခုနှစ်ကစပြီး ရထားပြေးဆွဲ ခဲ့တာကြောင့် အခု၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာဆိုရင် ဒီဘူတာဟာနှစ်တစ်ရာပြည့်ပါပြီ။ ကလောဘူတာကိုတော့ နိုင်ငံခြားသား တွေရော၊ ပြည်တွင်းက စိတ်ပ်ဝင်စားသူတွေပါ မကြာမကြာ လာပြီး လေ့လာ ကြတယ်။ ဓာတ်ပုံရိုက် ကြတယ်။ ကလောဘူတာဟာ ကလောမြို့မဈေးရဲ့ အရှေ့တောင်ဘက်ကျကျလောက်မှာပါ။
ကလောဘူတာလိုပဲ သက်တမ်းရင့်အဆောက်အဦတွေ ကလောမြို့ထဲမှာ အများကြီး ရှိနေသေး တယ်။
အရေအတွက်အတိအကျသိချင်လို့ ဒေသခံတချို့ကို မေးမြန်းကြည့်တယ်။ သေချာရေတွက် ကြည့်မယ်ဆိုရင် အဆောက်အဦးတွေ အရေအတွက်တစ်ရာလောက်ရှိမယ်လို့ ဆိုကြတယ်။
ကိုလိုနီလက်ရာအထင်အရှားကျန်တဲ့ အဆောက်အဦတွေကတော့ လက်ရှိကလောဟိုတယ်ပါ။ ဒီကလောဟိုတယ်ကို ၁၉၀၆မှာ တည်ဆောက်ခဲ့တာပါတဲ့။ ပြီးရင် Amara resort၊ Kalaw Hill Lodge villa တို့ဟာ ရှေးတုန်းကအဆောက်အဦးတွေကို ပြန်ပြုပြင်ထားတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကလက်ကျန် ဆေးရုံဟာလည်း ကလောမြို့မှာ ဒီနေ့အထိ ရှိနေသးတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိအချိန်မှာ စစ်ဆေးရုံလုပ်ထားပါတယ်။ ကနောင်ဆောင်ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့ပါ။
ကျန်တဲ့မထင်မရှားအဆောက်အဦးတွေကတော့ လူနေရပ်ကွက်တွေထဲမှာ မြုပ်နေတယ်။ ကလောဒေသခံတွေဟာ သူတို့ရဲ့ဘိုးဘွားဘီဘင်ကအဆောက်အဦးတွေကို ထိခိုက်လိုစိတ် မရှိကြပါဘူး။ မူရင်းအဆောက်အဦးကို မူရင်းအတိုင်းပဲ ထားကြတယ်။ သူတို့ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ခြံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ပြီး တဲနဲ့သာ နေရင်နေမယ်။ သူတို့ပိုင်တဲ့ အဆောင်အဦကြီးတွေ ကိုတော့ ပြန်လည်ရောင်းချတာမျိုး၊ ငှားတာမျိုးဆိုတာ မလုပ်ကြပါဘူး။
ကလောမြို့ဟာ ရှုခင်းကြည့်စရာ အင်မတန်ကောင်းလွန်းလှတဲ့မြို့လည်း ဖြစ်တယ်။ တချို့အလွမ်းဓာတ်ခံ ရှိသူတွေဆိုရင်တော့ လွမ်းစရာကောင်းတဲ့မြို့လေးအဖြစ်လည်း ခံစားနိုင်မှာပါ။
ကလောမြို့လေးကို မြေပြင်အနိမ့်အမြင့်အတက်အကျတွေပေါ်မှာတည်ထားတာဖြစ်လို့ ဖြတ်သွားဖြတ်လာ ကြည့်လိုက်မိရင် တချို့အိမ်တွေက လမ်းရဲ့အောက်မှာရောက်နေပြီး တချို့အိမ်တွေက တောင်ပေါ်မှာရောက်နေသလို ဖြစ်နေတယ်။
တချို့အိမ်တွေကတော့ တောင်ကမ်းပါးယံလေးမှာ တည်းတည်းလေးဆောက်ထားသလိုမျိုး၊ ဒီအိမ်တွေကိုသွားဖို့အတွက် တောင်ကမ်းပါးမှာ လှေကားထစ်လေးတွေဖော်ထားသေးတယ်။ ဒါကိုက ကလောမြို့ရဲ့ အမှတ်သင်္ကေတလေး တစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်။
ကလောမြို့နဲ့အနီးနားမှာ ပြည်တွင်းခရီးသွားတွေ လည်စရာနေရာတွေလည်း အများကြီးပါ။ ရွှေဥမင်ဂူဘုရား၊ နှီးဘုရား၊ သိမ်တောင်ဘုရား၊ အောင်ချမ်းသာဘုရား၊ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားတွေ ရှိတယ်။ သိမ်တောင်ကျောင်းပေါ်ကနေကြည့်ရင် ရှုခင်းတွေအရမ်းလှတယ်လို့ဆိုကြတယ်။ ပြည်တွင်းက အဖွဲ့လိုက်ခရီးသွားကြတဲ့ ခရီးသည်တွေအနေနဲ့ နှီးဘုရားမှာ အခမဲ့တည်းခိုနိုင်တယ်။
ပြည်တွင်းက ဧည့်သည်တွေ ကလောမြို့ရောက်ပြီဆိုရင် မလုပ်မဖြစ်လုပ်ကြတာကတော့ ရှော့ပင်း(ဈေးဝယ်)ထွက်တာပဲ။ ကလောမြို့မဈေးထဲမှာ ဒေသထွက်ပစ္စည်းတွေ၊ အိတ်ကြီးအိတ်ငယ် အသွယ်သွယ်နဲ့ ၀ယ်ကြတယ်။ တချို့ကကျတော့ ကလောမြို့ကိုရောက်ပြီဆိုရင် မြို့မဈေးထဲက စားသောက်တန်းကိုမဖြစ်မနေသွားပြီး ဟင်းထုပ်တို့၊ ငါးထမင်းနယ်၊ ၀က်သားချဉ်၊ တို့ဟူးကြော်၊ တို့ဟူးနွေး စတဲ့ ဒေသစာတွေ စားကိုစားလိုက်ရမှ။
မြို့မဈေးရဲ့အရှေ့ဘက်မှာ ငါးရက်ကို တစ်ကြိမ်ကျင်းပတဲ့ ကလောဈေးနေ့နဲ့ဆုံရင်တော့ တိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင် လာရောက်ရောင်းချတဲ့ လတ်ဆတ်ကော့ပျံနေတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် တွေနဲ့ ကြုံကြရမယ်။ သူတို့တွေကို မ၀ယ်ဝယ်အောင်ကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက အပြိုင်အဆိုင်စွဲဆောင်နေလိုက်ကြတာ ဈေးနေ့နဲ့ကြုံဖူးဆုံဖူးသူတွေသာ သိနိုင်မှာပါ။
ကလောမြို့ကလေးဟာ ပြည်တွင်းပြည်ပကလာရောက်ကြတဲ့ ဧည့်သည်တွေအတွက် ခဏတဖြုတ်လာရောက် အပန်းဖြေစရာ မြို့ကလေးဖြစ်တာကြောင့် ခရီးသွား ရာသီတွေ မှာတော့ နိုင်ငံခြာသားတွေရော၊ ပြည်တွင်းက ခရီးသွားအဖွဲ့တွေ နဲ့ပါပြည့်ပြီး စည်ကားနေ တတ်တယ်။ ကျန်တဲ့ကာလတွေမှာတော့ ခရီးသွားတွေ တဖြောက်ဖြောက်သာရှိတယ်။
ခရီးသွားရာသီမဟုတ်တဲ့ အချိန်တွေမှာတော့ ပုံမှန်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလောက်သာ အလုပ်ဖြစ်ကြတယ်။ စိုက်ပျိုးရေးအဓိကလုပ်တဲ့ ကလောမြို့ကနေ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ အများဆုံးထွက်တယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက် သစ်သီးဝလံတွေပြီးရင် နောက်တခု ကလောမြို့ကနေ အထွက်အများဆုံး ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်တွေပါပဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကလောမြို့မှာ စစ်ဦးစီးတက္ကသိုလ်ရှိလို့ ကလောမြို့ပေါ်မှာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအရာရှိတွေရဲ့ စစ်ကားတွေကို မကြာခဏတွေ့ရတတ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အပေါဆုံးအရာတွေကတော့ အမျိုးစုံလင်လွန်းလှတဲ့ တည်းခိုစရာနေရာတွေပါ။ အင်း၊မိုတယ်တွေကအစ ဟိုတယ်တွေ၊ resort တွေ အရောင်အသွေးမျိုးစုံပဲ။ ပြီးတော့ စားသောက်ဆိုင်တွေ အများမှ အများ ကြီးပါပဲ။
ရန်ကုန်၊ မန္တလေးမြို့ကြီးတွေနဲ့လည်း သိပ်မဝေးလွန်းမနီးလွန်း၊ နေရထိုင်ရတာကလည်း သက်တောင့်သက်သာဖြစ်၊ ရှုခင်းရှုကွက်တွေလည်းလည်းအရမ်းကောင်း၊ ရာသီဥတုကလည်း သာယာလွန်း…စတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်များစွာနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ ကလောမြို့လေးဟာ မြန်မာပြည်ထဲက တကယ့်အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ရတနာလေး တပါးလိုကို ဖြစ်နေပါရဲ့….။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/131269
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, January 18, 2016 No comments:
ကဏ္ဍ လမ်းညွှန်, သတင်း-ဆောင်းပါး
မဲပေးဖို့ အရေး… ဒါဖတ်ပါ…
လာမယ့် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အပြောင်း အလဲကို ဖန်တီးနိုင်မယ့် ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပမယ့် နေ့ပါ။
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်ကို အရောက် လှမ်းဖို့ ပြည်သူ တွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ် တွေကို ကိုယ်တိုင် ခေါင်းခေါက် ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ ပြည်သူ တွေမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် အပြည့်အ၀ အရှိဆုံး နေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီဆိုတာ နိုင်ငံရေးမှာ အများပြည်သူကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တာကိုခေါ်တာပါ။ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးက ပြည်သူတွေဟာ သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကို သူတို့ကိုယ်စား ပြောပေးနိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်တွေ မဲပေးရွေးချယ်ကြရတယ်။
အဲ့ဒီလိုရွေးချယ်တဲ့ပွဲကို အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲလို့ ခေါ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ၅ နှစ် ၁ ကြိမ် ကျင်းပလေ့ရှိတယ်။ မကြာခင်မှာ ကျင်းပတော့မယ့် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲဟာဆိုရင် ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်းမှာ ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရွေးကောက်ပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ ဖြစ်စေချင်တဲ့ အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်တွေ ဖြစ်ဖို့ အမှန်တကယ်လိုလားရင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မဲထည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မိမိတဦးတည်းရဲ့ မဲတပြားကြောင့် ဘယ်လိုအပြောင်းအလဲမှ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်ရင် အမှားကြီးမှားပါလိမ့်မယ်။ တဦးထဲကြောင့် ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် အဲ့ဒီလိုတဦးချင်းစီမဲတွေ ပေါင်းစပ်လိုက်ရင်ဖြင့် အပြောင်းအလဲတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့ အင်အားကြီးလာနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လူတွေဟာ လွှတ်တော်တွေထဲကို ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေ ဖြစ်စေချင်တဲ့၊ သင့်တော်တဲ့ဥပဒေတွေကို လွှတ်တော်အတွင်းမှာ ရေးဆွဲကြမယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်နဲ့ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်တွေကို စောင့်ကြည့်ပြီး တည့်မတ်တာတွေ လုပ်ပေးကြမှာပါ။ အဲဒီလိုပြည်သူတွေကို အမှန်တကယ်ကိုယ်စားပြုနိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်တွေ လွှတ်တော်တွေအတွင်း ရောက်ရှိသွားနိုင်ဖို့ ပြည်သူပြည်သားအားလုံးမှာ တာဝန်ရှိနေပါတယ်။
မဲပေးတဲ့အခါမှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ်တိုင်ဟာမဲပေးခွင့်ရှိသူလားဆိုတာ သေချာသိထားဖို့က အရေးကြီးလှပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့် နိုဝင်ဘာလ ၈ရက်နေ့မှာ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်မယ်။ မဲပေးရမယ့်မဲဆန္ဒနယ်မြေက မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းမှာ ကိုယ့်အမည်ပါမယ်။ အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေပြီဆိုရင်တော့ မဲပေးခွင့်ရှိနေပြီလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယူဆထားပြီး မဲရုံကို မဲသွားပေးဖို့သာ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါတော့။
တကယ်လို့ ဆန္ဒမဲပေးရမယ့်သူဟာ မဲမေးရမယ့် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့မှာ မဲဆန္ဒနယ်ရဲ့ ပြင်ပကိုရောက်နေမယ်၊ အချုပ်ခန်းမှာ အချုပ်ကျနေမယ်၊ ဆေးရုံတက်ဆေးကုသမှုခံနေရမယ်၊ နိုင်ငံရဲ့ပြင်ပကို တရားဝင်ရောက်ရှိနေမယ် ဆိုရင်တော့ ကြိုတင်မဲပေးခွင့်ရကြမှာပါ။
တခြားဘာအကြောင်းတစုံတရာမှ မရှိဘူးဆိုရင်တော့ ပုံမှန်အတိုင်းမဲပေးကြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူတွေ မဲထည့်ဖို့ လုပ်ဆောင်ရမယ့် အဆင့်တွေကတော့ သိပ်မခက်လောက်ပါဘူး။ မဲပေးမယ့်သူတွေအတွက် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်ပိုင်းမှာ မဲဆန္ဒရှင်သက်သေခံ လက်မှတ်တွေ ကို ကော်မရှင်က ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ့်နေ့မှာကတော့ မဲရုံကို မဖြစ်မနေသွားဖြစ်ဖို့သာ အဓိကပါပဲ။ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ့်နေ့မှာ မဲရုံတွေဟာ မနက် ၆ နာရီကနေ ညနေ ၄ နာရီအထိ ဖွင့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချိန်အတောအတွင်းမှာ သွားရောက် မဲပေးကြရမှာပါ။ မဲပေးမယ့်သူတွေအနေနဲ့ မဲရုံကိုရောက်ရင် ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက မဲဆန္ဒရှင် သက်သေခံလက်မှတ်ကိုပြပြီး မဲစာရင်းစာရွက်မှာ မိမိလာရောက်မဲပေးတဲ့အကြောင်း လက်မှတ်ထိုး ရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလိုထိုးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ဆန္ဒမဲလက်မှတ် ထုတ်ပေးတဲ့သူထံ သွားပြီး မဲတွေသွားထုတ်ရမယ်။ ထုတ်လာတဲ့မဲလက်မှတ်တွေမှာ မဲရုံမှူးလက်မှတ်ပါ၊ မပါကိုလည်း ဂရုစိုက်ခဲ့ပါကြပါဦး။ မဲရုံမှူးလက်မှတ်မပါရင် ပယ်မဲ ဖြစ်သွားနိုင်လို့ပါ။
ဆန္ဒမဲလက်မှတ်တွေကိုယ့်ရဲ့ လက်တွင်းရောက်ပြီဆိုရင်တော့ လျှို့ဝှက်မဲပေးခန်းတွေထဲကို ၀င်ပြီး ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ကို မဲပေးလို့ ရပါပြီ။ မဲပေးတဲ့အခါမှာ မိမိ မဲပေးလိုသူရဲ့ နံဘေးက အကွက်လေးထဲမှာ တံဆိပ်တုံး ထုခဲ့ရမှာပါ။ ရိုက်လိုက်လို့ တံဆိပ်တုံးက ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပါစေ…ပယ်မဲမဖြစ်ပါဘူး။ တံဆိပ်တုံးဟာ ကိုယ်ပေးမယ့် ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ အကွက်ကို ကျော်ပြီး တဖက်ကိုယ်စားလှယ်အကွက်ထဲ နည်းနည်းစွန်းသွားရင်တောင် ပဲမယ်မဖြစ်သေးပါဘူး။
အကွက်အများဆုံး အကျော်ခံရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဘက်ကနေ မဲရေတွက်သွားမှာ ဖြစ်လို့ပါ။ ဆန္ဒပြုတဲ့ တံဆိပ်တုံးထုတာကိုတော့ ဂရုတစိုက်ထုဖို့ လိုပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ ခုနှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာရော ၂၀၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲမှာပါ အခုလို တံဆိပ်တုံးနဲ့ မဲဆန္ဒပေးရတာမျိုး မကြုံတွေ့ခဲ့ဖူးတာကြောင့် မြို့နဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့ ကျေးရွာတွေနယ်တွေမှာ တံဆိပ်တုံးနဲ့ စိမ်းတဲ့အခြေအနေတွေ ဒီနေ့အချိန်ထိ ရှိနေပါသေးတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ရွေးကောက်ပွဲပညာပေး လုပ်နေတဲ့ အဖွဲ့တွေကတော့ တံဆိပ်တုံးထုတတ်ဖို့ကို အဓိကထား လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။ ကော်မရှင်အနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာ တံဆိပ်တုံးနဲ့ မဲပေးတာရော၊ ဘောပင်နဲ့မဲပေးတာရော နှစ်မျိုးစလုံးကို ခွင့်ပြုပေးဖို့ ပြန်လည်စိစစ်သင့်ပါတယ်။
မဲပေးတဲ့အခါမှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် တစောင်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် အတွက် တစောင်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်အတွက်တစောင် စုစုပေါင်း ၃ စောင်မဲပေးကြ ရမှာပါ။ တကယ်လို့ မဲပေးသူဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုတခုခုမှာ ပါဝင်နေရင်တော့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု အခွင့်အရေးတွေရအောင် လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အတွက် မဲတစောင်ထပ်ပေးကြရမှာပါ။ ဒါကြောင့် မဲရုံကိုလာပြီး မဲပေးသူတစ်ဦးဟာ အနည်းဆုံးမဲလက်မှတ် ၃ စောင်ကို ဆန္ဒပြုကြရမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိရဲ့ဆန္ဒမဲကို ပယ်မဲဖြစ် မသွားစေဖို့ ဂရုစိုက်ရဦးမယ့်အချက်တွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က အတည်ပြုထားတဲ့ အမှတ်အသားမပါတဲ့ မဲလက်မှတ်၊ မဲရုံမှူးလက်မှတ် မပါတဲ့ဆန္ဒမဲ၊ တာဝန်ခံထုတ်ပေးသူရဲ့ အမည်နဲ့ လက်မှတ်မပါတဲ့ ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦး ထက်ပိုပြီး ဆန္ဒပြုထားတဲ့ မဲလက်မှတ်၊ ကိုယ်စားလှယ်တဦးတယောက်ကိုမှ ဆန္ဒပြုထားခြင်းမရှိတဲ့ မဲလက်မှတ်၊ တံဆိပ်တုံးနှိပ်ပြီး ဆန္ဒပြုမှုမသေချာမထင်ရှားတဲ့မဲဆန္ဒလက်မှတ်၊ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်အတုဖြစ်တယ်လို့ မဲရုံမှူးက ဆုံးဖြတ်တဲ့ ဆန္ဒမဲလက်မှတ်၊ မဲပေးသူကို သိရှိနိုင်အောင် အမှတ်အသားပြုလုပ်ထားတဲ့ မဲလက်မှတ်၊ ဆုတ်ဖြဲထားတဲ့ မဲလက်မှတ်၊ ကော်မရှင်က ပယ်မဲအဖြစ် သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ မဲလက်မှတ် အစရှိတဲ့မဲလက်မှတ်ပုံစံတွေဟာ ပယ်မဲတွေပါ။
မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ မိမိတို့မဲပေးမယ့်ကိုယ်စားလှယ်ကို ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး၊ အသက်ကြီးငယ်ခွဲခြားခြင်း မရှိဘဲ ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အရည်အချင်း၊ အတွေ့အကြုံရှိမှုတွေပေါ်အခြေခံပြီး ရွေးချယ်ကြဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ်ရွေးချယ်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်ဟာ ကိုယ့်အတွက်၊ ကိုယ့်ရပ်ရွာအတွက် ဘယ်လို အကျိုးပြုမလဲ၊ ပြီးတော့ သူကိုယ်စားပြုပြီး ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ပါတီအခြေအနေ အစရှိတဲ့ အခြေအနေတွေအားလုံးကို အသေးစိတ်ခြုံငုံလေ့လာပြီးမှ ရွေးချယ်ဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်။ မဲဆွယ်စဉ် ကာလတိုကလေးအတွင်း ရေတိုထောက်ပံ့ပေးတာလေးတွေနဲ့တင် ကျေနပ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ် ရွေးချယ်တာမျိုး မဖြစ်ဖို့က အရမ်းအရေးကြီးလှပါတယ်။
မဲပေးရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ တဒင်္ဂစိတ်ခံစားမှုနဲ့ မဲပေးမှုမျိူး မဖြစ်စေဖို့ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေ ရင့်ကျက်နေဖို့လည်း လိုအပ်ပါသေးတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံလို ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူ အများစုဟာ စိတ်ဆန္ဒတခုတည်းပေါ်မှာ အခြေခံပြီး မဲပေးတတ်ကြပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှုဆိုတဲ့ နေရာမှာ ဒေါသ (အမြင်မကြည်လင်ခြင်း)၊ အကြောက်တရား၊ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ စိတ်ခံစားမှုနဲ့ အထင်ကြီးလေးစားစိတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ဥပမာ အနေနဲ့ အထင်ကြီးလေးစားစိတ်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် ပါတီတခုဟာ ကိုယ်နေတဲ့ရပ်ကွက်ကို မဲဆွယ်စဉ်ကာလအတွင်းမှာ လမ်းခင်းတာ၊ မီးလင်းအောင်လုပ်ပေးတာ အစရှိတာတွေ လုပ်ပေးလို့ အထင်ကြီးပြီး မဲထည့်တာမျိုးကို ဆိုလိုတာပါ။
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်းမှာက ဒီလို မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကတော့ ရှိနေမှာပါပဲ။ ဒီလို စည်းရုံးမှုတွေကြောင့် ပြည်သူတွေ အရွေးမှားခဲ့တဲ့ ဥပမာတွေကလည်း ရှေ့မှာများလှပါပြီ။
ပြည်သူတွေ မဲပေးပေမယ့်လည်း အရွေးမှားခဲ့ရင်တော့ဖြစ် ဘာမှ ထူးထူးခြားခြားေုပာင်းလဲလာမှာ မဟုတ်လို့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကာလမှာတော့ မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ သတိကြီးကြီးလက်ကိုင်ထားပြီး ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
အမှန်တကယ် အပြောင်းအလဲကို ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဆန္ဒမဲပေးပြီးရင်တော့ နိုင်ငံသား တာဝန်တစိတ်တပိုင်းကျေသွားပါပြီ။ နိုင်ငံသားတာဝန် အပြည့်အ၀ကျေချင်ရင်တော့ ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့မဲတွေ မှန်မှန်ကန်ကန် ရေတွက်ခံရရဲ့လားဆိုတာကို သေချာစောင့်ကြည့်ပေးဖို့ လိုအပ်ပါသေးတယ်။ မဲဆန္ဒရှင်တိုင်းဟာ ဆန္ဒမဲတွေရေတွက်မှုကို စောင့်ကြည့်ဖို့ တရားဝင် အခွင့်အရေးရှိပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ့် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်နေ့မှာ မဲပေးတဲ့အပြင် ဒီလို မဲရေတွက်တာကိုလည်း စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖြင့် အမှန်တကယ်ကို နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ တာဝန်ကျေပွန်ပြီလို့ မိမိကိုယ်ကို သတ်မှတ်လိုက်ပါတော့။
Original link - http://burmese.dvb.no/archives/116255
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, October 13, 2015 No comments:
ကဏ္ဍ လမ်းညွှန်, အသိပေးခြင်း, ဆောင်းပါး
Windows 10 USB Installer ကိုဖန်တီးခြင်း
Windows 10 ကို အသုံးပြုချင် သူများ အတွက် Windows 10 USB Installer ဖိုင်ကို ဖန်တီး ပြုလုပ် ချင်တယ် ဆိုရင် အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်ဖို့ အတွက် ကွန်နက်ရှင်တော့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Windows 10 USB Installer ဖိုင်ပြုလုပ်မယ် ဆိုရင် USB Storage အနည်းဆုံး 3GB အထက်ရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး Windows 10 ကိုလက်ရှိ အသုံးပြုနေတဲ့ Windows7သို့မဟုတ် Windows 8 နှင့် 8.1 version တို့ပေါ်ကနေ Upgrade ပြုလုပ် ချင်သူများ အတွက် Microsoft ကထုတ်လုပ် ဖြန့်ချိပေးတဲ့ Media Creation tool ဆိုတာနဲ့ Upgrade ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Windows 10 USB Installer ကိုလည်း Media Creation Tool ကို အသုံးပြုပြီး ပြုလုပ် ဖန်တီးပေး ရပါမယ်။
Media Creation Tool ကိုရယူဖို့ အတွက် https://goo.gl/dtbQwX ဆိုတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို သွားရပါမယ်။ အဆိုပါ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ရောက်ရင် ကိုယ်လက်ရှိ တင်ထားတဲ့ Windows ဟာ Windows 32 bit လား 64 bit လားဆိုတာကို ခွဲခြားပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Windows နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် Media Creation Tool ကို Download လုပ်ယူ ရပါမယ်။
Download ပြုလုပ်ပြီးပြီ ဆိုရင် အဆိုပါ ဖိုင်ကို Run လိုက်ပါ။ Upgrade This PC Now ရယ် Create installation media for another PC ဆိုတာရယ်ကို တွေ့ရင် Create installation media for another PC ဆိုတာကို ရွေးချယ်ပေး ရပါမယ်။ ရွေးချယ်ပေး ပြီးရင် Next ကိုနှိပ် လိုက်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့် ရောက်ရင် Language ကို English ရွေးပေး ထားပြီး Edition မှာ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ Edition ကို ရွေးချယ် ပေးရ ပါမယ်။
ပြီးသွားရင်တော့ USB Device နဲ့ အသုံးပြုမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် USB flash drive ဆိုတာကို ရွေးချယ်ပေး ရပါမယ်။ ရွေးချယ်ပေး ပြီးရင် Next ကိုနှိပ် လိုက်ပါ။ Next ကို နှိပ်ပြီးရင် USB drive ကို ကိုယ် အသုံးပြုမယ့် USB drive ကို ရွေးချယ် လိုက်ပါ။ Next button ကို ထပ်နှိပ် လိုက်ရင် Windows 10 အတွက် လိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို စတင် download ပြုလုပ်ပြီး အဆိုပါ Stick ထဲကို ထည့်သွင်း ပေးသွား ပါလိမ့်မယ်။
Download ပြုလုပ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပြီးသွားရင်တော့ ညွှန်ပြထားတဲ့ လုပ်ငန်းများ အတိုင်း ထပ်မံပြုလုပ် ပေးသွား လိုက်လျှင် Windows 10 USB Installer ကို ဖန်တီးတဲ့ လုပ်ငန်း အဆင့် ပြီးဆုံး သွားပြီဖြစ် ပါတယ်။
အဆိုပါ USB Stick နဲ့ အခြားသော ကွန်ပျူတာတွေ ပေါ်မှာ တပ်ဆင်ပြီး Windows 10 ကို Upgrade အလွယ် တကူ ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Original link - http://www.internetjournal.media/how-to/4195
ချစ်သူနဲ့ အချိန် အကြာကြီး တွဲလာတဲ့ အခါ ချစ်စိတ် ပျက်ပြားစေတဲ့ အချက်တွေကို သိဖို့ လိုပါတယ်။ စိတ်မကောင်း စရာက ချစ်သူ စုံတွဲ အများစုဟာ မရည်ရွယ်ဘဲ အဲဒီ အမှားတွေကို ကျူးလွန် မိပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ ချစ်သူကြား ချစ်စိတ် တဖြည်းဖြည်း လျော့နည်း လာတာက်ို ခံစားရရင် သည် အချက်တွေကို ကြိုးစား ရှောင်ရှား သင့်ပါတယ်။
အမှား ၁ - ရည်းစားဟောင်းအကြောင်းပြောခြင်း
ရည်းစားဟောင်း အကြောင်း ပြောတာဟာ ချစ်စိတ်ကို ပျက်ပြားစေတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်း တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တွက်ကြည့်ရင် ကိုယ့်ချစ်သူက သူ့ အဆက်ဟောင်း အကြောင်း ပြောပြတာကို ကိုယ်ကြိုက် လို့လား။ ကြိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သည်တော့ ချစ်သူက မင်းအဆက်ဟောင်း အကြောင်းပြောပြ စမ်းပါ ဆိုရင်တောင် မပြောဘဲ စကားလွှဲဖို့ ကြိုးစားပါ။
အမှား ၂ - ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ပျက်ငြီးငြူခြင်း
ချစ်သူ ကောင်မလေးက သူ့ကိုယ်သူ ငြီးတွား ငြူစူ နေတာကို ဘယ်ယောကျာ်းမှ ကြားချင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်က ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဘယ်လိုပဲ မြင်မြင် ချစ်သူ ကောင်လေးက ကိုယ့်ကို သဘောကျတဲ့ အကြောင်းရင်း တစ်ခုတော့ ရှိပါတယ်။ သူက ကိုယ့်ကို ချစ်ပြီး ကိုယ်ဟာ လှတယ်၊ ဆွဲဆောင်မှု ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မချစ်ရင် ချစ်သူ ကလည်း ကိုယ့်ကို ချစ်ဖို့ ခက်ခဲ ပါလိမ့်မယ်။
အမှား ၃ - ကိုယ့် သူငယ်ချင်း အဖွဲ့ထဲက ဇာတ်လမ်းစုံကို ခင်းပြခြင်း
ကိုယ့်သူငယ်ချင်း အဖွဲ့ထဲက ဇာတ်စုံကို အမြဲခင်းပြီး ငြီးတွား နေမယ်ဆိုရင် အခု ရပ် လိုက်ပါတော့။ ချစ်သူက ဒါကို အရေး စိုက်မှာ မဟုတ်ပါဘုး။ ဒါကြောင့် ဒီအကြောင်းနဲ့ သူ့ကို စိတ်ရှုပ်အောင် မလုပ်ပါနဲ့။ ဒီအကြောင်း တွေကိုချည်း နှစ်ယောက်သား ပြောနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့် အကြောင်း ကိုယ်ပြောဖို့ အချိန် ဘယ်ရှိ တော့မှာလဲ။
အမှား ၄ - တယောက်တကွဲ စိတ်ကြိုက်နေခြင်း
စုံတွဲ အများစုဟာ အချိန်ကြာ လာတာနဲ့ အမျှ တယောက် တကွဲ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်ကြ ပါတော့တယ်။ သည် အချက်ကြောင့်ပဲ တယောက်နဲ့ တယောက် သံယောဇဉ် လျော့ပါး လာပါတယ်။ တကယ်လို့ နှစ်ယောက်လုံး ကြိုက်တာ တစ်ခုခု ရှိမယ်ဆိုရင် အဲဒီ အလုပ်ကို မပြတ်စေဘဲ ဆက်လုပ် သင့်ပါတယ်။
အမှား ၅ - ဖရိုဖရဲကပိုကရို ၀တ်ဆင်ခြင်း
မိန်းကလေးတွေ အတွက် ဒါက အရေးကြီးပါတယ်။ ချစ်သူနဲ့ ကိုယ် ချစ်သက်တမ်း ဘယ်လောက် ကြာကြာ ချစ်သူက တစ်ခုခု ကိုတော့ မြင်ချင် မှာပါပဲ။ ဖရိုဖရဲ မသပ်မရပ် ပုံစံက တခါတလေ ဆွဲဆောင်မှု ရှိပေမယ့် အမြဲတမ်း ဆိုရင် စိတ်ပျက်စရာ ဖြစ်လာ ပါလိမ့်မယ်။
အမှား ၆ - ဖုန်းကိုင်ခြင်း
ချစ်သူနဲ့ ချစ်စိတ် မြင့်တက် နေချိန်မှာ ရုတ်တရက် ဖုန်းမြည် လာတယ် ဆိုပါစို့။ ဖုန်းကို ကောက် မကိုင်ပါနဲ့။ ချစ်သူရဲ့ ခံစားချက်ကို အရင် တွေးကြည့်ပါ။ ဖုန်းကိုင်လိုက်တဲ့ အတွက် ဒီဖုန်းဟာ သု့ထက် အရေးကြီးတယ်လို့ ချစ်သူက ယူဆပြီး နှစ်ယောက်တွဲ လာတာ ဘယ်လောက် ကြာကြာ ချစ်စိတ်ကို အဖုအထစ် ဖြစ်စေပါတယ်။
အမှား ၇ - ပျင်းရိခြင်း
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြော နေလို့ အိမ်ကို ချစ်သူ ရောက်လာ တာတောင် မသိဘူး။ တီဗီ ကြည့်နေလို့ ညစာတောင် မချက်ဖြစ်ဘူး။ ဒီလို ပျင်းရိပုံ မျိုးဟာ ချစ်စိတ်ကို လျော့ပါးစေလို့ သေချာပေါက် ရှောင်သင့်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတို့ ဘ၀မှာရော ချစ်ပျက်ပြားစေတဲ့ ဘယ်လို အချက်တွေနဲ့ ကြုံဖူးသလဲ။ ကွန်မန့် ပေးခဲ့ပါဦး။
Original link - https://www.facebook.com/yummystories
ကဏ္ဍ ဗဟုသုတများ, လမ်းညွှန်
Website Version ထွက်လာတဲ့ Google Hangout
မကြာသေးခင်ကမှ Version အသစ်ထုတ်ပြီး အသုံးပြု သူတွေကို ဝန်ဆောင်မှု အသစ်တွေ aပးခဲ့တဲ့ Google Hangout ဟာ အခု ဆိုရင် Website မှာပါ ဆက်သွယ် စကားပြော ဆိုနိုင်ပါပြီ။ Google Hangout ဟာ Mobile Application တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ Feature တွေ အတိုင်းပဲ Website မှာလည်း ထည့်သွင်းပေး ထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မိမိရဲ့ Friend List ကို Website Interface ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာ ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ဗီဒီယို Chat ခြင်း ၊ အသံဖြင့် Chat ခြင်းနဲ့ မက်ဆေ့စ် စာသားများ ပို့ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Hangout Website ရဲ့ ထူးခြားချက် ဖြစ်တဲ့ နောက်ခံ Background ပုံများ သူ့အလို အလျောက် ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ User တွေကို ဆွဲဆောင် ထားပါတယ်။ Website ရှိလာတဲ့ အတွက်ကြောင့် ကြည်လင်စွာ စကားပြော ဆိုနိုင်ခြင်း ၊ မက်ဆေ့ခ်ျ ပို့ခြင်းတို့ကို လျင်မြန် တွင်ကျယ်စွာ ပို့နိုင်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Google Hangout ကို Chrome Extension နဲ့ Chrome Desktop Application တွေမှာ လည်း အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
Google Hangout ကို Website ကို အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဘာ account မှ Create ထပ်လုပ်စရာ မလိုပဲ မိမိရဲ့ Gmail သို့မဟုတ် Google + တို့နဲ့ပဲ အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ Google Hangout Website ကို အသုံးပြု လိုပါက အောက်က link ကနေ သွားရောက် အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်။
Ref : Google+
ကဏ္ဍ Google, လမ်းညွှန်